I Dukwi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 438. Ny laharam-pokontaniny dia 30. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dutlwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 055. Ny laharam-pokontaniny dia 44. Ny laharam-pehintaniny dia -23.983333 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.9.
I East Hanahai dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 532. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Eretsha dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 720. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Etsha 1 dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 965. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Etsha 13 dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 377. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Etsha 6 dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 130. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gabane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 15 237. Ny laharam-pokontaniny dia 19. Ny laharam-pehintaniny dia -24.666667 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.782222.
I Gachibana dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 746. Ny laharam-pokontaniny dia 22. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gakgatla dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 654. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia -24.54303 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.617454.
I Gakutlo dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 350. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gamabuo dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 744. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -22.627799 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.357436.
I Gamajalela dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 437. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -25.401856 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.441929.
I Gambule dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 482. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.57831 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.597045.
I Gamodubu dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 501. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -24.501862 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.7018.
I Gani dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 727. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gasita dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 063. Ny laharam-pokontaniny dia 33. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gathwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 879. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia -25.391944 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.499392.
I Ghanzi dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 14 809. Ny laharam-pokontaniny dia 17. Ny laharam-pehintaniny dia -21.566667 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.783333.
I Gojwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 411. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -21.797028 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.285772.
I Gonutsuga dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 635. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Goo-Sekgweng dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 563. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Good Hope dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 6 362. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia -25.467123 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.439213.
I Gootau dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 401. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -22.726752 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.422597.
I Goshwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 573. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Groote Laagte dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 849. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gudingwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 725. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gulubane dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 797. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.91994 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.308722.
I Gumare dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 8 532. Ny laharam-pokontaniny dia 17. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Gungwe dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 545. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.489855 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.381094.
I Gweta dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 304. Ny laharam-pokontaniny dia 106. Ny laharam-pehintaniny dia -20.183333 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.233333.
I Habu dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 533. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Hatsalatladi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 726. Ny laharam-pokontaniny dia 23. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Hebron dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 950. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Hukuntsi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 654. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -24 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.75.
I Hunhukwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 753. Ny laharam-pokontaniny dia 18. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ikoga dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 673. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ikongwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 533. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -23.135625 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.422694.
I Inalegolo dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 533. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Itholoke dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 497. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Jackalas 1 dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 093. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Jackalas No 2 dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 222. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Jamataka dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 650. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Jao dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland Delta any Botsoana. Ny isam-poniny dia 229. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kacgae dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 634. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kachikau dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 356. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -18.166667 ary ny laharan-jarahasiny dia 24.466667.
I Kajaja dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 31. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kalakamati dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 858. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -20.592353 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.310694.
I Kalamare dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 196. Ny laharam-pokontaniny dia 21. Ny laharam-pehintaniny dia -22.933688 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.570316.
I Kanaku dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 188. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.